Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Europe bụ ihe magburu onwe nzukọ ebe nke ọtụtụ dị iche iche omenala - na culinary omenala. Mba ọ bụla nwere ya dị iche iche amata, nke na-adọta ndị ọbịa nri n'ime ya akụkọ ihe mere eme na ihe nile ọ na-enye. Na ná mba ụfọdụ,, na pụtakwara flavorful ọṅụṅụ! Ndị nke…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Obodo ato uto abịa na ọtụtụ iche nile Europe. Mba ọ bụla na mpaghara nwere ya obere na-emeso ha bụ ndị mpako na-enye. Maka njem nleta na a ụtọ eze, ọ dịghị ihe ọzọ alluring banyere njem karịa ọhụrụ ndị na-amasị. Ebe a na-anyị n'elu 5 kacha mma…